"Ary nony nivoaka Jesôsy, dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ka nahasitrana ny marariny." - Mat. 14:14.
Aoka hasehoko anao ny fiainan'i Kristy, ny fangoraham-pony, ny fanetren-tenany sy ny fitiavany, ary ny fahalemem-panahiny tsy hay lazaina. Natao haka tahaka ny ohatra nasehony ianao. Efa nomen'Andriamanitra anao ny fiainana sy ny fitahian-tsoa rehetra izay mahatonga izany fiainana izany ho mahafinaritra. Ho valin'izany, dia takiny aminao kosa ny fanompoana, ny fankasitrahana, ny fitiavana ary ny fankatoavana ny lalàny. Zava-dehibe indrindra ireo fitakiana ireo ary tsy tokony hohamaivanina velively. Tsy misy zavatra hafa takiny aminao anefa ka hahasambatra anao mihoatra noho ireo, eny, fa na dia amin'izao fiainana izao aza. — YI, 30 Janoary 1884.
Miray fo amin'ny taranak'olombelona mijaly ilay Andrianan'ny lanitra. Mila fahalemem-panahy tsy misy fihatsaram-belatsihy ary fangoraham-po ombam-pitiavana ny mpiara-belona amintsika (...) Tsy hisy mihitsy ny fitomboana ao amin'n'i Kristy raha tsy hampiharintsika ny lesona efa nomeny mikasika ny fangoraham-po sy ny fiantrana ary ny fitiavana. Tsy ho vita mihitsy ny haneho ny endrik'i Kristy raha tsy mbola ao amin'ny fanahy io fitiavana teraka avy any an-danitra io. Tsy ho tafiditra ny vavahadin'ny fanjakan'Andriamanitra akory ireo izay tsy ahitana taratra io toetra io. — YI, 20 Oktôbra 1892.
Fihetsika tsy masina iray monja avy amin'ny Mpamonjy antsika dia ampy hanimba ny Môdely ka tsy hahatonga Azy ho ohatra tonga lafatra ho antsika. Na dia nalaim-panahy tamin'ny lafiny rehetra tahaka antsika aza anefa Izy, dia tsy nahitana pentim-pahotana na dia kely aza. Toy izao no nanambarany ny toetrany avy teo am-bavan'ny mpaminany: "Jehôvah, Izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany; fa izany no sitrako".
Ireo rehetra manaiky ny anaran'i Kristy, dia tokony hankasitraka ireo zavatra ireo koa eo amin'ny resaka ataony sy ny fitondran-tenany ka hiharihary eo anatrehan'izao tontolo izao fa maka tahaka ilay Modely izy (...) Na iza na iza mino an'i Kristy dia tsy maintsy manao ny asan'i Kristy. Ny Tompo dia efa naseho teo amin'izy ireo ho mpanao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety anabonin'ny tany, ary ireo indrindra no voa entin'ny tena Kristianina marina. —YI, 13 Oktbra 1892.